Ny vaovao farany momba ny varotra iraisam-pirenena - Alietc.com
Aprily 3, 2021 0 hevitra
Xi'an Hanaraka ny fahombiazan'ny Shenzhen
Ny fahaleovan-tenan'i Shina amin'ny haitao amin'ny drafitra fampandrosoana dia manambara ny tanjony: ny fanitarana amin'ny sehatry ny haitao sisintany. Taorian'ny nahazoany fahombiazana tamin'ny haitao niaraka tamin'ny Huawei an-trano sy Tencent Holdings, Shenzhen dia modely ho an'ny tanàna toa an'i Xi'an. Xi'an, tanàna iray lehibe mitombo amin'ny taona 2020, dia nandray fepetra hentitra mba hampiroboroboana zava-bita amin'ny semiconductor […]Hamaky bebe kokoa
March 17, 2021 0 hevitra
Fitomboana ara-toekarena ambany any amin'ny faritry ny Golfa ka hatrany amin'ny Banky manakorontana
March 16, 2021 0 hevitra
GE Healthcare dia manolotra ny Vscan Air
March 15, 2021 0 hevitra
Xiaomi dia mizara 10% amin'ny famoahana ny fameperana ataon'ny mpitsara amerikana
Ny anjaran'i Xiaomi dia nahita ny fitsambikinana tamin'ny 25 martsa raha nitsara vetivety ny fameperana napetraky ny filoha teo aloha Donald Trump ny mpitsara amerikana. Ny mpitsara ny distrikan'i Etazonia Rudolph Contreras dia nanala ny embargo navoakan'ny governemanta Trump. Nilaza izy fa hosokaina ilay orinasa sinoa raha ajanona ireo fanampiana. Tsy misy porofo manamarina ny Xiaomi […]Hamaky bebe kokoa
March 14, 2021 0 hevitra
Manangona vola ny Airline Virgin
Nopotehin'ny areti-mandringana ity dia mikasa ny hanangona 160 tapitrisa pounds ny Virgin Atlantic Airways, hoy ny mpitondra tenin'ny kaompaniam-pitaterana Richard Branson. Ny làlan-drivotra dia manatsara hatrany ny toe-bolany, hoy izy, ary nanampy ny famatsiam-bola farany farany (£ 160 tapitrisa) dia fanohanana tsara amin'ny 2021 satria mbola miadana ny fahasitranana. Fivarotana varotra varotra Boeing 787 roa tamin'ny volana […]Hamaky bebe kokoa
March 13, 2021 0 hevitra
Raiso amin'ny lahateny miaraka amin'ny SPACs
Ny orinasan'ny Grab ride-hailing dia mifampiraharaha amin'ny orinasam-pandraharahana manana tanjona manokana amerikana (SPAC) hivoaka ampahibemaso. Ny fifampiraharahana fampiraisana dia mitentina eo amin'ny $ 35 miliara ka hatramin'ny $ 40 miliara, ny fifanakalozana lehibe indrindra hatramin'izay. Ny Grab Holdings Inc dia niresaka tamin'ny Altimeter Capital Management, izay manohana SPAC roa. Mikasika io, nisy tatitra vaovao nilaza fa mifampiraharaha ny Grab […]Hamaky bebe kokoa
March 12, 2021 0 hevitra
India mamoaka ny famokarana hydrôma maintso
Ny hetsika hidrozena maitso any India dia nifanarahan'ny Fusion Fuel Green sy ny BGR Energy Systems. Hanangana fotodrafitrasa mifandraika amin'izany izy ireo ao Tamil Nadu, fanjakana atsimon'i India amin'ity taona ity. Tanjona ny fanitarana ny drafitra hidrôniôma maitso ao amin'ny firenena. Fusion Fuel Green, miaraka amin'ireo birao any Portugal sy Irlandy, no hanome ny zavamaniry an'i Tamil Nadu […]Hamaky bebe kokoa
March 9, 2021 0 hevitra
Tanjona handefasana sakafo maivana ho an'ny andro ankafizinao
Target Corporation dia hanomboka marika vaovao tsy ho ela. Andro ankafizin'ny anarana hoe, ny tsipika sakafo sy zava-pisotro dia hanolotra karazan-tsakitsaky isan-karazany, sakafo sy zava-pisotro 700 mahery. Manomboka amin'ny menaka gilasy ka hatramin'ny mofo, mofomamy, zava-pisotro sy maro hafa. Miezaka misarika ny mpanjifa izay […]Hamaky bebe kokoa
March 8, 2021 0 hevitra
Ny mpiasa vehivavy japoney dia mamely an'i Etazonia sy Eropa
Nisondrotra ny mpiasa vehivavy japoney, nihoatra ny Eropa sy Etazonia isan-jato, hoy i Kathy Matsui, lefitra lefitra teo aloha sady lehiben'ny tetikady japoney ho an'ny banky fampiasam-bola manerantany Goldman Sachs. "Womenomics", teny noforoniny, dia noraisin'i Shinzo Abe, praiminisitra teo aloha, izay nandray fepetra hamela ny vehivavy handray […]Hamaky bebe kokoa
March 7, 2021 0 hevitra
Ny vondrona AirAsia any Malezia hanomboka ny fandefasana Drone
Na dia toa mihanaka aza ny seranam-piaramanidina lafo vidy amin'ny fotoanan'ny areti-mandringana, ny AirAsia Group Bhd an'ny Malaysia dia mikendry ny hampiditra taxi-be sy serivisy fiaramanidina fandefasana voalohany. Ny drafitra iray hafa dia ny hanomboka ny indostrian'ny fitetezana fiara amin'ny volana aprily mba hanamorana ny dia. Tony Fernandes, Tale jeneralin'ny vondrona, nilaza fa ny taxi-be misy mpanamory fiaramanidina mitondra […]Hamaky bebe kokoa
Vokatra amin'ny toeram-pambolena - Voamaina, Voankazo sns
Sakafo sy fambolena
Varotra sy fampirantiana momba ny varotra
Masinina sy fitaovana fanodinana sakafo & sakafo Masinina sy fitaovana fambolena Zava-pisotro misy alikaola, paraky sy vokatra mifandraika amin'izany Apparel Fitaovana fanatanjahantena Fitaovana sy kojakoja fiara Fikolokoloana tarehy sy fikarakarana manokana zava-pisotro zavatra simika Fanorenana sy trano Consumer Electronic Fitaovana sy kojakoja elektrika Energy Fitaovana milina sy fananganana milina Fampidinana ao amin'ny toeram-pambolena - Zezika, Pesticides & Seeds Vokatra momba ny toeram-pambolena - graveins, voankazo sns Vokatra trondro sy trondro Sakafo sy fambolena Masinina sakafo sy zava-pisotro Furniture Fanomezana & asa tanana Fahasalamana sy fitsaboana Fanampiana ara-pahasalamana Home & Garden Home Appliance Fambolena - voninkazo, zavamaniry ary vokatra mifandraika amin'izany Akanjo zazakely sy zazakely Fiompiana, akoho amam-borona, hena ary vokatra biby Kitapo sy tranga enta-mavesatra milina Ny akanjon'ny lehilahy Mineraly sy metalyurgie Birao sy fitaovam-pianarana Fitaovana hafa momba ny tontolo iainana Masinina sy fitaovana indostrialy hafa Fangatahana & fanontana Vokatra sakafo sy zava-pisotro vita amin'ny zava-pisotro sy vokatra Vovoka sy plastika Security & Protection Fikolokoloana hoditra Fanatanjahan-tena sy fialamboly Vokatra lamba sy hoditra Timepieces firavaka eyewear Tools & Hardware Fiara sy kojakoja